Jamal Khashoggi : Sacuudigu qoraaga la la'yahay waxay kala kulmeysaa siyaasad xumo - BBC News Somali
Jamal Khashoggi : Sacuudigu qoraaga la la'yahay waxay kala kulmeysaa siyaasad xumo
14 Oktoobar 2018
Waa kuma wariye Jamal Khashoggi ee la la'yahay
Wakaaladda wararka ee Boqortooyada Sacuudi carabiya ayaa sheegtay iney jawaab ka bixineyso tallaabba kasta oo siyaasadeed ama dhaqaale oo Sacuudiga ka soo gaarto sababa la xiriira wariyaha la la'yahay.
Wakaaladda oo soo xigatay mas'uul sare oo boqortooyada ka tirsan ayaa sheegtay ganaax kasta oo dowladda Sacuudiga lagu ganaaxo "iney si adag jawaab uga bixin doonto."
Mr Khashoggi oo lagu yaqaanno cambaareynta siyaasadda boqortooyada ayaa ugu war dambeysay 2-da October isaga oo xilligaasi booqday qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay inuu Sacuudigu "ganaaxayo" haddii dilka wariyaha ee lagu eedeeyey Sacuudiga ay rumoowdo.
"Iyaga oo sheegay iney soo dhaweeynayaan baaritaanka ay si wada jir ah u wadaan Sacuudiga iyo Turkiga, baaritaannada kaddibna ay ka soo bixi doonaan iney Sacuudiga si buuxda u qaadato mas'uuliyadda wariyaha la la'yahay."
Sacuudi Carabiya: eedda dilka wariyaha naloo soo jeediyey "waa been abuur"
Bil ka dib inqilaabkii la isku dayay Turkiga
Turkiga oo xabiska ka daynaya 38,000 oo maxaabiis
Saraakiisha Turkiga ayaa waxay ku adkeysanayaan iney Mr Khashoggi ay xubno ka socday sirdoonka Sacuudiga ay ku dileen Qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay Istanbul.
Sacuudiga maxaa ka soo kordhay?
Wakaaladda wararka ee Sacuudiga oo soo xigatay xubno sare oo boqrtooyada ka tirsan ayaa waxay qortay "iney boqortooyada ay iska caabbin doonto waxyeello ama tallaabbo kasta oo dhan walba uga timaadda oo la xidhiidha eedda dusha laga saaray ee wariyaha la la'yahay oo ku dambeeyey qunsuliyaddeeda Istanbul"
"Waxayna Boqortooyadu sheegtay iney jawaab culus ka bixin doonto tillaabba kasta oo lagu soo qaado, maadaamaa dhaqaalaha Sacuudiga uu saameyn xoog leh uu ku leeyahay dhaqaalaha dunida.
Sidi loo waayey wariyey Khashoggi waxaa sacuudiga ku sii badanaya cadaadiska uga imanaya beesha caalamka.
Mas'uuliyiin badan oo Mareykanka iyo Ingiriiska ka socday oo bisha soo socota ka qayb geli lahaa shir maalgashiga ku saabsan oo ka dhici lahaa Sacuudiga waxay sheegeen ineysan shirkaasi ka soo qayb galeynin ilaa ay Sacuudiga caddeyso wariye Khashoggi halka uu ku dambeeyey.
Dhacdadani ayaa waxay noqotay arrin saameyn weyn u geysatay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Amiir Maxamed Bin Salmaan qorshayaashiisa isbeddelka oo uu doonayey inuu ka hirgeliyo Sacuudiga.
Warmurtiyeed rasmi ah oo ay soo saareen diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxay sheegeen Mr Khashoggi iney dileen xubno ka socday laanta sirdoonka Sacuudiga.
Madaxweyne Trump muxuu ka yiri?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu dalkiisu "si adag u ciqaabi doono" Sacuudiga haddi dhimashada Mr Khashoggi ay ku caddaato Sacuudiga.
Trump oo sheegay inuu aad uga caroonayo haddii dilka Khashoggi ay amar ku bixisay Sacuudiga
Wuxuuna intaa ku daray "inuu aad uga carooday isla markaana uu uga niyada jabay arrintan" ayna keeni karto heshiisyada dhinaca militariga ee ay la gashay Sacuudiga iney saameyn u geysato.
Baaritaanku halkuu marayaa?
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevut Cavusoglu ayaa wuxuu sheegay iney Sacuudi Carabiya ilaa iyo hadda ay baaritaanka kiiska ay gacan buuxda ka geysanin.
Dhinaca kalana Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudi Carabiya Amir Cabdulcaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz ayaa wuxuu sheegay inuu dalkiisu uu diyaar u yahay inuu "runta shaaca ka qaado."
Wuxuuna Mr Cavusoglu uu ku baaqay iney boqortooyada ay saraakiisha Turkiga u oggolaato iney Qunsuliyaddeeda galaan oo ay baaritaan ka sameeyaan.
Sacuudiga sideey arrintan u saameysay
Warbixin uu Sacuudigu soo saaray Axadda ayaa waxay tilmaameysaa inuu suuqa sarrifka lacagaha ee caalamiga ah iyo ganacsigaba uu hoos u dhacay 7%.
Wakaaladda wararka ee AFP waxay iyaduna qortay laba wareeg oo keli ah inuu Sacuudigu waayey $50 (£38bn) bilyan oo doolar oo ka mid ah dhaqaalaha Sacuudiga ka soo galo isdhaafsiga ganacsiga caalamiga ah oo dhan $450 bilyan oo doolar.
Salah Shamma oo wakaaladda wararka ee Reuters u warramayna wuxuu sheegay "arrinta Khashoggi sida ay u soo baxday inuu saamiga ganacsiga sacuudiga uu hos u dhac ku yimid".
Maxaa ka dhacday Istanbul?
Saraakiisha sirdoonka Turkiga waxay bbc-da u sheegeen iney hayaan caddeeymo maqal iyo muuqaal ah oo muujinaya iney Wariyaha Qoraaga ah ee Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga.
Wuxuuna qunsuliyadda uu galay Mr Khashoggi inuu ka soo dhammeysto waraaqo la xiriira gabar Turki ah oo uu guursan lahaa.
Waxay sirdoonka Turkiga ay ku adkeeysanayaan xubna ka tirsan sirdoonka boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ka kooban 15 xubnood iney wariyaha qunsuliyadda ku dhex dileen.
Erdogan: Waa niyad jab arrinta Jamal Khashoggi
Jamaal Khashoggi: Suxufi Sacuudiga u dhashay oo lagu la' yahay Istanbul
Waayaha nololeed ee Jamal Khashoggi, weriyaha la waayey ee Sucuudiga ah
Telefishiinka dalka Turkigana wuxuu baahiyey muuqaal muujinaya Mr Khashoggi oo qunsuliyadda Sacuudiga sii galaya.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo BBC u sheegay inuu doonayo "inuu ogaado sida ay wax u dhaceen"